Stefan Löfven: Argagaxisadu waxay rabaan in ay ina kala qaybiyaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven: Argagaxisadu waxay rabaan in ay ina kala qaybiyaan
La daabacay onsdag 14 januari 2015 kl 16.00
Maanta ayaa baarlamaanka Sweden ay fooda isku dareen hogaamiyayaasha xisbiyada, doodan oo ahayd middii ugu horaysay ee dhexmarta hogaamiyayaasha xisbiyada sannadkan. Ra’iisal wasaare Stefan Löfven ayaa bilaabay dooda
Lövfen ayaa hadalkiisa ku bilaabay weerarkii argagixisada ee Paris iyo banaanbixii axadii uu kaga qayb galay magaalada Paris, si uu taageeri ugu muujiyay kelmada xorta ah. Sidoo kale Ra’iisal wasaare Löfven ayaa magacaabay weeraro argagixiso oo kale, sidii weerarkii dhawaan ka dhacay Nayjeeriya, kii Oslo iyo Utöya, sheegayna in argagixisadu ay rabaan in ay dadka isku diraan
-Hadafka argagixisadu waa in ay ina kala irdheeyaan, faafiyaan nacayb iyo baqdin oo ay dabar gooyaan bulshadan dimuqraadiyada ah. Waxay rabaan in ay isku keen diraan, lakiin weligeen yeelin mayno in ay ina maamulaan ama wadnaheena baqdin geliyaan. Waxaynu u taaganahay xornimada saxaafada, diinta. Argagixisaduna ma aamusin doonaan kelmada xorta ah. Sidaa ayuu qudbadiisa uu barlamaanka ka jeediyay ku bilaabay Stefan Löfven